အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ၂၀၁၂ မယ်စင်္ကြဝဠာ
12 Responses to “၂၀၁၂ မယ်စင်္ကြဝဠာ”
အင်း... မြန်မာမပါလို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြီးသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သိတောင် မသိလိုက်ဖူး။း)
ဖိလစ်ပင်းမလေးထက် ယူအက်စ်အေမလေးက ပိုဆွိဖြစ်တယ် ချောရေ၊ ဒါကြောင့် ရသွားတာလည်း မသိ။ ခုတလော မအားတာနဲ့ ကိုယ်လည်း စဆုံးမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး :)
မနေ့က Sky Net ကလွှင့်လို့ကြည့်လိုက်သေးတယ်...ယူအက်စ်အေမယ်လေးရတာ သူကချစ်ရာကောင်းတယ် မျက်နှာချိုတယ်ကော
Miss Australia is 3rd runner and Miss Brazil is 4th runner up, and the top 16 finalists are not chosen only evening gown competition, there still many steps to move in final 16, as personal interviews, public speaking, catwalk skills etc.....To be honest, I prefer Miss USA rather than Miss Philippine because this girl hasafresh aura,abubbly personality and possesses one of the prettiest faces in the competition and finally hollywood star quality plus home town girl that enough for the crown. So far, my favourite girl is Miss Russia in this year..
miss universe ပွဲကို ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမချောရေ။ အရှုပ်တွေလုပ်နေရလို့ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်လ်ကို မကြည့်လိုက်ရဘူးး) ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေမှာလုပ်တဲ့ပွဲတိုင်း အ်ိမ်ရှင်တွေပဲ ဆုရရသွားကြတယ်း)) Miss USA လေးလဲရထိုက်ပါတယ်လေ..အချောကလေး။
သတိမထားလိုက်မိဘူး..မချောတင်လို့ ကြည့်ခွင့်ရသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...မြန်မာသာဝင်ပြိုင်နိုင်ရင်ကောင်းမှာနော်..
အစ်မကတော့ ဒီနှစ်ပဲံက မနှစ်ကပွဲလောက် စိတ်လှုပ်ရှားမှု မပေးဘူးလို့ မြင်မိတယ်။ MCတွေ စွဲဆောင်မှုမရှိတာလဲပါမယ်။ နောက်.. ဖိလစ်ပိုင်သူလေးကို ရမယ်ထင်ခဲ့ပေးမယ့် လွဲခဲ့တယ်။ USA က ၀တ်စုံရော၊ အရပ်ရော၊ ခလုပ်တိုက်သေး တာကြောင့် ရမယ်တောင်မထင်ဘူး။ နှုတ်မေးဖြေရာ မှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်သူလေးက ပိုသာတယ်။ အာရှသူလေးရစေချင်ပေမယ့် USA ရသွားတာက ဘက်လိုက်တယ် ထင်ပြီး အတော်ဂယက်ရိုက်သွား ခဲ့တယ်နော်။
တို့မြန်မာတွေလည်း မခေပါဘူးနော်။ နောက်ပိုင်း ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်တွေ ရှိလာစေချင်တယ်ချောရေ..။
ညီမလည်း မယ်စကြာဝဠာပွဲတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် မမချောရေ
ခုလို ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ
I think Ms Philippine is just normal. Ms USA is natural beauty without fake eye lash. USA is pretty in any angle. Ms Philippine's eye make her face not pretty without fake eye lash.
Not just bias, Ms. USA is deserved to get Ms Universe Title.
Ms. P gotalot of support bcos Philippinos are spreading around the world. If there is Ms Myanmar, we will support.. Wish to have Ms. Myanmar Universe..
အရင်ကဆို စလောင်းကနေ စောင့်ကြည့်နေကြ..ခုတော့ မချော ပို့ စ်ကို ဖတ်ရတော့မှ သိရတော့တ်..တရုတ်မ ဝတ်စုံက ထူးဆန်းတယ်..အီသီယိုပီးယားမယ်က မော်ဒယ်လုပ်သင့်တယ်..နှစ်တိုင်း ဗီနီဇွဲလား၊ ကိုစတာရီတာမယ်တွေ ၁၅ထဲမှာ ပါတယ်..ဖိလစ်ပိုင်မယ်လေးက ချစ်စရာလေး..ယူအစ်မယ်လေးက သွားလေးတွေ တော်တော်လှတယ်..